Umshini wokuwasha izitsha ekhishini akuseyona okunethezeka. izinhlobo Compact kakhulu ziphoqa. Kulesi sihloko sibheka model like Candy Cdcf 6. Izinzuzo nezingozi nebubi we nemishini ekhaya. Yini abanikazi bathini mayelana abalithandayo? Incazelo imisebenzi, imiyalelo isicelo, amathiphu, nokuningi, bheka isihloko esithi.
Ubukhulu elincane has a Umshini wokuwasha izitsha Candy Cdcf 6 07. Photo kubonisa lokhu. Ukuphakama cm 60, ububanzi - 55 cm, ukujula -. 50 cm Lezi Ubukhulu uvumele Candy Cdcf 6 afakwe ikhishi elincane.
Noise ezingeni kuyinto esiphezulu 53 dB. Ukuze uqhathanise, ingxoxo ethule ukhiqiza umsindo 60 dB.
Ngo Candy Cdcf 6 ukufingqa uhlobo omiswe enikeziwe.
Amanzi ukugeza ngamunye ibusa 8 amalitha. Inombolo enkulu izitsha ukuthi ukwazi ukubona ebhuthini ye - 6 amasethi.
Kukhona umsebenzi isiqalo yephuza 8 amahora. Lena elula yokulondoloza ugesi, futhi lapho amanzi ezindlini inikezwe ngohlelo.
Umshini wokuwasha izitsha Candy Cdcf 6 07 imfundo okuyinto Ilungiselelwe ngemodeli ngayinye, has 6 izinhlelo. kunconywa ukufunda yonke incwajana ngokucophelela ngaphambi kokusebenzisa imishini. Futhi uma ngesizathu esithile lost, lingatholakala ngezansi izingxenye eziyinhloko futhi ebalulekile kuwo. Okokuqala udinga uzijwayeze ukusetshenziswa ephephile.
Into yokuqala ukucabangela lapho ufaka enye - lokhu phansi. Ngaphandle kungenzeka umuntu abanjwe ugesi ezimeni ukwehluleka. Umshini wokuwasha izitsha Candy Cdcf 6 Julayi elihlangabezana nazo zonke izindinganiso zokuphepha kanye ifakwe ipulaki and cable, ekwazi kutsho iyunithi enikeziwe isokhethi futhi ngeke engenawo umsebenzi ofanayo.
Akubalulekile ukuxhuma umshini esidayisa okungalungile usebenzisa i-adaptha. Kungcono ukusizakala ngogesi futhi kufakwa amapayipi isici ekhaya.
Okungamelwe ukwenze nge Candy Cdcf 6 Umshini wokuwasha izitsha?
Kunethonya noma isiphi ingcindezi lonke isisindo umshini noma yayo izingxenye, iminyango, amapayipi, obhasikidi.
Tenu uthinte ngesikhathi ukuhlinzwa, futhi kanye ekupheleni.
Layisha izitsha ayifanele kokugeza ukuklama imishini ekwazi ukuzilawula. Ngokuvamile kuba plastic.
Sebenzisa izimpushana, si, amashampu, insipho kanye nezinye izinto zokususa amabala elakhelwe Umshini wokuwasha izitsha.
Shiya idivayisi umnyango ovulekile.
Gcina izingane kude control panel, engxenyeni engaphakathi, lid.
Wezwakala kanye nokusebenzisa ubudlova ukuze sebenzisa izinkinobho kuyi-dashboard.
Ukushaja ukuqapha ekuhlungeni izingane futhi abantu abakhubazeke ngokwenqondo.
Beka umnyango izinto ezisindayo. Njengoba umshini ungawela.
Imigomo yokusetshenziswa kanye nezinqubo
Ngaphambi kulayishwa izitsha, udinga ukuhlola khona izakhi abukhali futhi ukuzisika. Angalimaza izingxenye iraba endlu Imishini.
Ngokulandelayo, kudingeka ulandele izinyathelo ezilandelayo:
Beka obhasikidi ababili.
Beka isidlo phansi kuqala, bese-ke ekamelweni eliphezulu.
Spoons nezimfoloko, wafaka umnyango ekhethekile izibambo phezulu, ngakho basuke kangcono bahlanzwa.
Vala umnyango lize ukuchofozwa.
Vula iyunithi kunethiwekhi.
Khetha uhlelo oyifunayo noma control panel efanelekayo.
Qhafaza kabili on inkinobho yamandla. Okokuqala sokuvunywa kohlelo, kanti eyesibili - ukuqala umshini.
Inqubo chofoza ngokuphelele ye On / Off ukhiye.
Vula imizuzwana kuphela emva 30 umnyango ngemva isinyathelo 9.
Ngakho umuntu kufanele aqaphe ukuze afeze isigaba 10, njengoba Splashes amanzi.
Uma ngokuhamba wokugeza kuyadingeka ukushintsha kohlelo Candy Cdcf 6 Julayi, bese ulandela lezi zinyathelo:
Cindezela bese ubamba "Qala / rezet".
Lapho lo mjikelezo egeza eyeka ngokucindezela inkinobho ukukhetha olunye uhlelo.
Ukuze uqale, cindezela inkinobho ngesinyathelo 1.
Imithetho izinto indawo ukugeza ephelele
Ukuze zonke izinto sasikhazimula, kubalulekile hhayi kuphela ukukhetha cleanser izinga, kodwa futhi sinake indawo tableware obhasikidi.
Emaphethelweni phansi ebhasikidini kumelwe athathe ipuleti esikhulu ikhava. Nezitsha, nezitsha isaladi, amabhodwe, nezitsha udinga ukubeka esiphendula esibhekisa phansi.
Izimbiza enezindonga eziphakeme kumele sithambekele ukuze amanzi bachitha nabo. ngodonga Special ukusiza ihlanganise izitsha amaningi ngangokunokwenzeka.
Izimfoloko, imimese, nezinkezo nezinye izinto ezibekwe egunjini elikhethekile izibambo phezulu.
izinto ngazinye ingabikwa ukuze Umshini wokuwasha izitsha, enikeziwe evela dispenser ayizange wageza off the yokuwasha. Ukuze wenze lokhu, kudingeka uvivinye umzimba imithetho ngokuqapha nokuphepha. Ngomusa ukudonsa umnyango evula, kodwa hhayi Lalima ngokuphelele. Beka izitsha avala umnyango, kuyilapho ungathola umusi kancane ashisayo.
Yiziphi imodi egeza has Umshini wokuwasha izitsha Candy Cdcf 6 S? Ukufundiswa kuhlanganisa ithebula ezibukwayo elinikeza zinhlelo ezilandelayo egeza.
"Fundzisisa" - isidingo ukugeza okuzikhulula, amahalavu nezinye izinto kakhulu singcoliswe. Uhlambulule isifika kathathu ngesikhathi degrees 70. Oku-ukugeza - degrees 50, futhi 70 eyinhloko.
"Jwayelekile" - efanelekayo ukusetshenziswa nsuku zonke.
"Izindleko-ephumelelayo" - kuzosiza onge amandla futhi amanzi, uma izitsha akuzona kakhulu ezingcolile.
"Izibuko" - Imodi okugeza obucayi, zobumba izibuko, yewayini, lokunyenti, ngabe tinkomishi, ingilazi, crystal nokuningi.
"Fast" - ukugeza okusheshayo izinto ezidingekayo. Ungalanda lungene 4 amasethi.
"3 in 1" - okugeza izinkomishi, izitsha zokuthwala, izitsha kanye ukungcoliswa ngokulinganisela.
Zonke izinhlelo adinga nokwesula izitsha.
Imigomo yokusetshenziswa yokuwasha
Akubalulekile ukuba uthele imadlana ngokuhlanza kakhulu ku ethekwini. Ukuze imithamo ephezulu kuthreyi has a ilebula. Umshini wokuwasha izitsha Candy Cdcf 6, okuzokwenziwa ezichazwe kulesi sihloko unikezwa sezingubo amanzi. Ngakho-ke, lokhu imodeli ibusa yokuwasha kancane.
Uma kunjalo, kwakukhona lime esikalini, kungaba zisuswe nge indlela elandelayo ngaphakathi Umshini wokuwasha izitsha:
Beka ephansi kubhasikidi inkomishi uviniga.
Susa zonke izinto zensimbi.
Khetha Imodi evamile ukugeza.
Nika amandla ukugeza umjikelezo.
Uma izinyathelo ezingenhla plaque wahlala, kungenzeka ukuphinda inqubo noma esikhundleni uviniga citric acid. Ukuze idiphozi ezimhlophe awavelanga, umshini kukhona gumbi ukuze bathole usawoti, amanzi ukuthambisa. Layisha kubalulekile ngezikhathi ezithile. Inkomba ku iphaneli azisa khona yayo noma engekho.
Ukunakekela Umshini wokuwasha izitsha. Ukuhlanza izihlungi
Candy Cdcf Juni 7 - Umshini wokuwasha izitsha edinga njalo yokuhlanza izihlungi injectors. Control panel nahlanza kusuka ukungcola usebenzisa indwangu ethambile ezimanzi, bese wagcoba ukwakha indawo eyomile.
Ngeke esetshenziselwa ukuhlanza noma iyiphi ingxenye emshinini, metal emabhulashini, Imicu yotshani indawo futhi Abrasives.
Ukuhlanza izihlungi, udinga bawasuse ethangini egeza ngokudonsa isibambo ekhethekile. Ngaphansi kwamanzi agobhozayo iphume zonke izinto. Ungasebenzisa ibhulashi elithambile ukuze kanzima ukuze afinyelele izindawo. Awukwazi ukusebenzisa lisebenze ngaphandle kwezihlungi. Ngakho ukwehluleka kungenzeka.
Umshini wokuwasha izitsha emnyango akumele bahlanza usebenzisa isifutho. Liquid ungathola ngaphakathi noma ingxenye electronic unit.
Ngemva ukusetshenziswa kobuchwepheshe ngamunye akufanele uvale uvalwe amboze. Kungenjalo nephunga kabi isikhunta.
Ngaphambi ukugcinwa kanye wokuhlanza Candy Cdcf 6 Julayi Umshini wokuwasha izitsha kufanele inqanyuliwe kwamandla.
Isifundo for izingxenye kwangaphakathi ukulingana indwangu ethambile zihlaliswe kuviniga. Powder futhi kumakhemikhali awuketshezi akuvumelekile.
Uma uhlela isikhathi eside hhayi ukusebenzisa Umshini wokuwasha izitsha, kungcono ukuchitha umjikelezo ukugeza ngaphandle izitsha, ayeke amanzi. Shiya umnyango ovulekile. Lezi zenzo ukunweba izinto ezisebenza ngogesi.
Ukuze ushintshashintsha iyunithi kwenye indawo ukuyigcina ovundlile.
Rubber lwezimpawu buthelela ngaphakathi ukudla okusalile, eyagcina siqale ukubola kanye nephunga edabukisayo. Ukuze ugweme izinkinga ezifana kufanele ukuqapha njalo isimo yezingxenye zenjoloba.
Candy Cdcf 6 Julayi: Izibuyekezo
Kuba iyisibusiso wangempela besifazane lokhu Umshini wokuwasha izitsha. Konke kuqala nge usayizi. Small zasendlini ezingasetshenziswa ukuziqhayisa compact ezinjalo. Umshini zingafakwa iKhabhinethi, ngaphandle nokulahlekelwa okukhulu isikhala, indawo endaweni emakhishini ezincane. Izitsha besifazane kujabulise nobumsulwa ingilazi yabo beakers - bukhanye. Ngesikhathi esifanayo, ngokuvumelana abanikazi abaningi Candy Cdcf 6, amanzi ukusetshenziswa sesinciphe kakhulu ngemva yokufuna lobu buchwepheshe ewusizo.
Abaningi belulekwa ngaphambi amabhodwe kakhulu singcoliswe namapani, cwilisa nabo emanzini futhi ususe Izinsalela ukudla bebodwa. Naphezu kobungako nobuningi bayo encane, abanikazi athi umthamo omuhle. Injabulo ehola crystal, wageza Umshini wokuwasha izitsha. Yena kukhanya futhi shimmers. Awudingi ukuchitha eziningi egeza isikhathi bezihlikihla izibuko, isaladi nezitsha namavazi eyenziwe crystal.
Umshini wokuwasha izitsha Candy Cdcf 6 S futhi kungiphathe kabi ukungasabeli kahle wathola. Abathengi uqale ukugxekwa kwabo ngokubukeka. Kwabaningi kwaba sengathi uyisidala eziningi ezinjalo imali. Hhayi aneliseke abanikazi futhi Okwamanje akukacaci kahle imiyalelo ebhalwe phansi. Omama abaningi abasemakhaya ungathandi Iqiniso lokuthi ngaphambi kokuba kulayishwa izinto ezidingekayo ukususa ke kusukela izinsalela zokudla. Kungenjalo, izitsha abazigezi off.
Indlela ukukhetha igesi odongeni kubhayela double - izeluleko kongoti
Umshini omuhle wekhofi ekhaya: ukubuka ngokuningiliziwe kwamamodeli amahle kanye nokubuyekezwa komkhiqizi